Sangano reARTUZ Rinoparura Zvidzidzo zvepaDandemutande kuVana Vari Kunyora Bvunzo Gore Rino
Sangano reARTUZ rinoti raparura chirongwa chekubatsira vadzidzi nezvidzidzo zvepadandemutande vachishandisa nharembozha nemakombiyuta.
Sangano revarairidzi vekumaruwa, reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, raparura nhasi zvidzidzo zvinoshandisa masaisai, zvepadandemutande, zvakanangana nekubatsira vana vari kutarisirwa kunyora bvunzo gore rino, dzeGrade 7, Ordinary Level neAdvanced Level.
Mutungamiri weARTUZ, VaObert Masaraure, vanoti nhengo dzesangano ravo dzakazvipira kubatsira vana ava nezvidzidzo kuitira kuti vasasarira shure zvakanyanya munguva ino zvikoro zvakavharwa nekuda kwedenda reCovid-19.
VaMasaraure vanoti varairidzi vakawanda havasi kukwanisa kuwana mari dzekutenga masaisai kuti vakwanise kupa zvidzidzo izvi, asi vashoma vakwanisa kutanga chirongwa ichi vakawanawo rubatsiro kuburikidza nevane tsiye nyoro vari kuvabatsira nemari.
Vanoti chikumbiro chevarairidzi kuhurumende chekuti ipindire kuburikidza nekuwanisa varairidzi pamwe nevadzidzi masaisai pachena hachisati chapindurwa, izvo zvavanoti zviri kuitawo kuti vamwe vadzidzi, zvikuru vekumaruwa pamwe nevanoshaya, vakundikane kupinda muzvidzidzo izvi.
VaMasaraure vanoti vachange vachiwanisa vana zvidzidzo zvose zvinouya pabvunzo dzavanozonyora mukupera kwegore, uye vana vanosvika mazana mashanu nemakumi maviri ndivo vakwanisa kupinda muzvidzidzo izvi pazuva ravo rekutanga.
Mutauriri webazi redzidzo yepasi neyepamusoro, VaTaungana Ndoro, vanoti bazi ravo rinorumbidza chose danho ratorwa nesangano reARTUZ iri, uye vanokurudzirawo mamwe masangano kuti atorewo matanho akadaro.
Panyaya yekuti hurumende haisati yapindira mukuti varairidzi pamwe nevana vechikoro vawane masaisai nezvimwe zvinodiwa mukudzidza pamadandemutande, VaNdoro vanotiwo bazi ravo riri mushishi kushanda nemadzisahwira aro kuti riwane zvikwanisiro zvose zvinodiwa pazvidzidzo zvepamadandemutande, sezvo remangwana redzidzo rananga kumadandemutande.​